Al-Shabaa Oo Ciiddamo Ku Soo Ban-dhigtay Deegaanka Ambareesa ee Gobolka Shabeellada Hoose | Salaan Media
Al-Shabaa Oo Ciiddamo Ku Soo Ban-dhigtay Deegaanka Ambareesa ee Gobolka Shabeellada Hoose
(SM-Kismaayo) Xarakada Al-shabaab ayaa ciidammo soo dhamaystay tababar ku soo bandhigtay deegaanka Ambareesa ee gobolka Shabeellada, hoose waxaana ciidamadaas oo dhoola-tus dhigay ay wateen gaadiidka dagaalka iyo hub kala duwan.
Guddoomiyaha Al-shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose, Sheekh Maxamed Abuu-Cabdalla oo la hadlay ciidamadan ayaa sheegay in laga doonayo inay ka qayb-qaataan dagaallada ay kula jiraan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee is-garabsanaya.
“Waxaan rajaynayanaa in maalmaha soo socda aad wacdaro ka dhigtaan goobaha dagaalka oo aad cadawga Alle xanuun gaadhaan. Waxaa la idinka doonayaa inaad dhufaysyada ugu dadadataan cadowga, haddii aad xanuun dareemaysaan iyaguna mid ka daran taas ayay dareemayaan,” ayuu yidhi Sheekh Abuu-Cabdalla.
Dhinaca kale, waxaa ciidamadan la hadlay saraakiil ay ka mid yihiin, Sheekh Cabdallaahi Raabi iyo Sheekh Jaamac Cabdisalaam, waxaanay labaduba ciidanka la soo bandhigay ku boorriyeen inay ogaadaan inay yihiin kuwa kaalin weyn ku leh difaacidda diinta Islaamka.
Ugu dambeyn, saraakiishan ayaa waxay ciidamadan ku guubaabiyeen inay noqdaan kuwo is-walaashada maadaama ay ku jiraan dagaal ay kaga horjeedaan waxay ugu yeerdheen cadow doonaya in dalka iyo diinta uu burburiyo, iyaguna isku arkaan inay yihiin kuwii diinta iyo dal samata-bixin lahaa.